Imivuzo yonyaka yooRhulumente abaphezulu be-US
Ngokwesiko, inkonzo karhulumente iye yaba nomoya wokukhonza abantu baseMelika ngeqondo lokuzithandela. Enyanisweni, imivuzo la magosa karhulumente aphezulu ahlala ephantsi kunezo zecandelo lezobucala ezizimeleyo kwiindawo ezifanayo. Ngokomzekelo, umvuzo wonyaka wama-400,000 kaMongameli we-United States ubonakalisa iqondo elikhulu "lokuzithandela" xa kuthelekiswa nemali eyi-14 yezigidi eziqhelekileyo zomvuzo wee-CEO zenkampani.
Mongameli we-United States
2018: i $ 400,000
2000: $ 200,000
Umvuzo womongameli wenyuka ukusuka kuma-200,000 ukuya kwii-400 000 zama-$ 000 ngonyaka we-2001. Umvuzo okhoyo wamongameli wama-400,000 uquka i-$ 50,000 yesibonelelo seendleko.
Njengomthetheli -mkhulu wezempi zanamhlanje kunye nezindleko, umongameli uthathwa njengomntu onamandla kunazo zonke kwezopolitiko kwihlabathi. Ukuba nolawulo lweenombolo zezixhobo zenukliya okwesibini kuphela kwilo laseRashiya, umongameli unembopheleleko yempilo yezoqoqosho ngobukhulu behlabathi kunye nokuphuhliswa nokusetyenziswa komgaqo-nkqubo wasekhaya waseMzantsi Afrika kunye nakwamanye amazwe .
Umvuzo kaMongameli we-United States usekwe yiNgqungquthela, kwaye njengoko kufunwa yiCandelo II, Icandelo 1 loMgaqo-siseko wase-United States, alinakuguqulwa ngexesha lexesha likaMongameli kwi-ofisi. Akukho ndlela yokulungisa ngokuzenzekelayo umvuzo womongameli; ICongress kufuneka idlulise umthetho owugunyazisa.
Ekubeni umthetho owenziwe ngo-1949, umongameli ufumana i-akhawunti engama-50 000 ye-akhawunti yenkcitho yonyaka ngeenjongo ezisemthethweni.
Ukususela ekumisweni koMthetho woMongameli wangaphambili we-1958, ababengumongameli baye bafumana ipenshoni yomhlala-phantsi wonyaka kunye nezinye iintlawulo kubandakanya abasebenzi kunye nezibonelelo zeeofisi, iindleko zokuhamba, ukukhuselwa kweenkonzo ezifihlakeleyo kunye nokunye.
Ngaba ngabaMongameli banokuyichitha iMvuzo?
Oomama basekuMelika baseMelika abazange bafune ukuba ngabaongameli babe nobutyebi ngenxa yenkonzo yabo. Enyanisweni, umvuzo wokuqala wongameli we-25,000 wee-saliyisisombululo esichengileyo sagqitywa ngabathunywa kwiSivumelwano soMgaqo-siseko esixela ukuba umongameli akafanele ahlawulwe okanye ahlawulelwe nayiphi na indlela. Ngaphezulu kweminyaka, nangona kunjalo, abanye abaongameli ababezimeleyo xa bekhethiweyo bakhethe ukulahla umvuzo wabo.
Xa waqala ukusebenza ngo-2017, uMongameli we-40 u-Donald Trump wajoyina uMongameli uGeorge Washington wokuqala ngokufungela ukungamkeli umvuzo wongameli. Nangona kunjalo, akukho namnye ongakwenza oko. Isiqendu II somGaqo-siseko-ngokusebenzisa ukusetyenziswa kwegama elithi "iya kuba" -imfuneko yokuba umongameli kufuneka akhokhwe:
"UMongameli uya kufumana iinkonzo zakhe, imbuyekezo, engeyi kunyuswa okanye iyancipha ngexesha eliza kutyunjwa, kwaye akayi kufumana phakathi kwelo xesha nayiphina imilument evela eUnited States , okanye nayiphi na. "
Ngo-1789, iCongress in Congress yenza isigqibo sokuba umongameli akafumananga ukuba akhethe okanye angawamukeli umvuzo wakhe.
Ngenye indlela, uMongameli uTrump wavuma ukugcina i-$ 1 (idola enye) yomvuzo wakhe.
Ukususela ngoko, uye waqhuba ngesithembiso sakhe ngokunikela ngeentlawulo zakhe zemivuzo yee-100,000 zee-arhente ezahlukeneyo, kuquka iNkonzo kaZwelonke yeePaki kunye neSebe leMfundo.
Ngaphambi kwesenzo sikaTrump, abaMongameli uJohn F. Kennedy noHerbert Hoover banikela ngemirholo yabo kwiintlobo ezahlukeneyo zokuncedisa kunye nezentlalo.
Ngumbongameli we-United States
2018: iiRandi 230,700
2000: $ 181,400
Umvuzo we-vice-wongameli uthathwa isigqibo ngokuhlukileyo kwi-president. Ngokungafani nomongameli, i-vice-president ifumana iindleko ezizenzekelayo zokulungiswa kokunikezelwa kwabanye abasebenzi baseburhulumenteni njengokuba kusekwe rhoqo yiCongress. I-Vice-Vice-President inenzuzo efanayo yomhlala-phantsi njengalezo ezihlawulwa ngabanye abasebenzi baseburhulumenteni phantsi koLawulo lwe-Employees Retirement System (FERS).
2018 $ 210,700
2010 $ 199,700
Imirhumo yababhala be-15 amasebe aseburhulumenteni abandakanya iKhabhinethi kaMongameli ibanjwe rhoqo yi-Ofisi yoLawulo lwaBasebenzi (OPM) kunye neCongress. Unobhala weKhabinethi-kunye ne-Chief House ye-Chief House yabasebenzi, uMlawuli we-Arhente yokuKhuselwa kweNdalo, umlawuli we-Ofisi yoLawulo kunye neBhajethi, ummeli we-UN kunye nommeli wezorhwebo wase-US-bonke bahlawulelwa umvuzo omnye. Ngonyaka wonyaka we-2018, onke amagosa ayahlawulwa i-$ 210,700 ngonyaka.
ISebe lezomthetho - US Congress
AmaSenethi kunye nabaMeleli beFayile kunye neFayile
2018: $ 174,000
2000: $ 141,300
2018: $ 223,500
INdlu kunye neNkundla yeeNkampani ezinkulu kunye neZincinci zincinci
2018: i-193,400 zamawaka
2000: $ 156,900
Ngenjongo yokuhlawulela, amalungu angama-435 weCongress-Senators kunye nabameli-baphathwa njengabanye abasebenzi baseburhulumenteni kwaye bahlawulelwa ngokweShedyuli yoLawulo oluPhezulu kunye noLawulo oluphezulu olulawulwa yi-Ofisi yoLawulo lwaBasebenzi base-United States (OPM). Iishedyuli zokuhlawula i-OPM kubo bonke abasebenzi baseburhulumenteni basetyenziswe rhoqo yiCongress. Ukususela ngo-2009, iCongress ivotele ukuba ingamkeli iindleko zonyaka ezizenzekelayo zokuhlala ezihlawulwa kubasebenzi baseburhulumenteni. Nangona iCongress ngokubanzi yayingagqiba isigqibo sokwamkela kunyaka, amalungu ngamnye akhululekile ukuwujika.
Iingqungquthela ezininzi zijikeleza iingeniso zomhlala - phantsi zeCongress . Nangona kunjalo, njengabanye abasebenzi baseburhulumenteni, amalungu eNgqungquthela abakhethwe ukususela ngo-1984 agqitywe nguShishino lwaBasebenzi baseRhafu yokuHlala.
Abo batyunjwe ngaphambi kowe-1984 baqulunqwe ngokwemiqathango ye-Civil Service Retirement System (CSRS).
Jongene Jikelele we-United States
2018: $ 267,000
Izigwebo eziManyeneyo zeNkundla ePhakamileyo
2018: i $ 255,300
2000: $ 173,600
2018 $ 208,000
2-018 $ 220,600
Njengamalungu eNkongolo, abagwebi bezepoliti-kubandakanywa nezigwebo zeeNkundla eziPhakamileyo-zihlawulwa ngokweShedyuli yoLawulo lwe-OPM kunye neeSatifikethi. Ukongezelela, abagwebi bezemfundo bafumana iindleko zonyaka ezifanayo zokuguqulwa kokuphila kwabanikezeli baseburhulumenteni.
Ngaphantsi kweSiqendu III somGaqo-siseko, imbuyekezo yeZigwebo zeNkundla eziPhakamileyo "ayiyi kuncitshiswa ngexesha lokuqhubeka kwabo kwiofisi." Nangona kunjalo, imivuzo yabagwebi abasemagqabini angaphantsi ingatshintshwa ngaphandle kwemimiselo yomgaqo-siseko.
Izibonelelo zomhlala-phantsi zeeNkundla zeNkundla eziPhezulu zithe "ziphakamileyo." Izigwebo eziphantsi komhlalaphantsi zinelungelo lokufumana umhlala-phantsi wobomi obulinganayo nomvuzo wabo opheleleyo. Ukuze kulungele umhlala-phantsi opheleleyo, izigwebo zokuthatha umhlala-phantsi kufuneka zisebenze ubuncinci beeminyaka ezili-10 zanikezelwa inani leminyaka yobuLungiswa kunye neNkundla yeNkundla ePhakamileyo.
Kulula Kangakanani Ukuhlahla Ibhomu Le-Atomic?
Mayelana ne-Federal Aviation Administration (FAA)
IiNkcazo zeNkqubo zoNcedo lwezeMpilo zeeNtsholongwane ze-US
Inkqubo eyinkimbinkimbi yokudubula umqeshwa kaRhulumente
"I-Deep State" iTheory, ichazwe
Indlela yokufaka iSitampu zokutya, iNkqubo yeSNAP
Kutheni i-Facebook Age Limit 13
Konke malunga neKhikhism Code of Conduct
Yintoni i-Blood Pressure?
Umlando weNkcazo yeCaste yeNdiya
I-10 ye-Heartland Rock Iingoma zee-80s
Imbali yeCabbage Patch Kids
I-Mermaid Body efunyenwe kwiBhitshi
Indlela yokudibanisa "Ukuhlonipha" (ukuhlonipha) ngesiFrentshi
Yintoni Eyenza I-Course Online Online?
Piao Liang, esithi "Mhle" kwisiShayina saseChina
Iindlela ezi-5 zokunceda ukugcina iPlaneti kwi-30 imizuzu okanye ngaphantsi
Indlela yokudibanisa "Ukuhambelana" (Ukuhambelana)
Indlela yokufumana iKholeji yeKholeji ngokuthatha iiKlasi zamaKhala zamahhala
Izinto zeMicrosoft and Techniques zikaJackson Pollock
Baghdad kwiMbali yamaSilam
Amacandelo okuKwakha ukuThembela koTitshala
Isivumelwano -Sivumelwano esiMiselweyo
IMithetho yeHockey yeHockey kunye neMithetho yeNHL
Izidingo eziSisiseko kwi-Naturalization yase-US
AbaBhali abaPhambili beBafazi beXesha lama-20
Uhambo lokuhamba: IsiFrentshi isigama esichazwe